Ry Andriamanitra Mahery izay maty sy nijaly mba ho onitry ny fahotako, mamindrà fo amiko, Ry Hazofijaliana Masin'i Jesoa Kristy, aoka homba ahy Ianao. Ry Hazofijaliana Masin'i Jesoa Kristy, aoka ho fanantenako Ianao Ry Hazofijaliana Masin'i Jesoa Kristy, ampanalaviro ahy ny fiadiana maranitra rehetra Ry Hazofijaliana Masin'i Jesoa Kristy, ampanalaviro ahy rehefa mety ho fahafatesana Ry Hazofijaliana Masin'i Jesoa Kristy, arotsahy amiko ny fiadanana Ry Hazofijaliana Masin'i Jesoa Kristy, ataovy amin'ny lalam-pamonjena aho
Ry Hazofijaliana Masin'i Jesoa Kristy, arovy amin'ny loza mety hitranga momba ny fanahy sy ny vatana aho. Ho tsaroako lalandava anie ny Hazofijaliana Masin'i Jesoa Kristy. Ry Jesoa avy any Nazareta izay nofantsihana tamin'ny hazofijaliana, mamindrà fo amiko. Ampanalaviro ahy isan'andro ny fanahy maloto ary ho tanterahinao izany vavaka izany noho ny RA sarobidin'i Kristy, ho voninahitry ny nahatongavanao ho Nofo, izay hitarika anay amin'ny fiainana mandrakizay, notanterahinao tamin'ny andron'ny Noely ary namantsihana Anao tamin'ny Zoma Masina. Amena.
< VAVAKA MBA HANANANA FAHASALAMANA
VAVAKA FIFONANA SY FANETRE-TENA >